ရီရတာ အူ​တွေကိုနာလို့ – Blue Sea
blueseaskt | January 10, 2019 | Joke | No Comments
“​My Name Is ပါ​ဗျာ…
“​တောက်​…ခင်​တာနဲ့ လိုင်​ကီး ​ပေးစရာလား​ဗျ…
“အမ်​… Like ပါ​ဗျ…
ကျစ်​..instagram ကို​တောင်​မှ အစ်​စတာဂရင်​ တဲ့​ဗျာ..​ပြောကိုမ​ပြောချင်​​တော့ဘူးမျက်​နာကဖရိုဖရဲနဲ့​တောဇီးကွက်​မီးဖွားတုန်းအချင်းမကျတဲ့ရုပ်​နဲ့​ပြောလိုက်​ရင်​ဘိုလို​ခြေ​ထှောက်​မှာကျသမန်းဆီ​တွေတတ်​လို့…
“အာဘယ်​ကဘုတိုလဲမသိဘူး..ကျွန်​​တော်​သွားသမျှ KTV ​တွေထည်းမှာအဲ့​စော်​နာမည်​မကြားဖူးဘူး…
“အာ Bee Talk ပါ​ဗျ….
“ဖွင့်​​ပေးထားတယ်​အနီးအနားက Fri ​တွေကိုရှာ​ပေါ့…
“We Chat လား….
​တောက်​…..We Chat ကိုများဝှီးချဲတဲ့..တီထွင်​တဲ့​ကောင်​ကြားရင်​မျက်​နာကိုဓားနဲ့ဘယ်​​လောက်​များလှီးချင်​လိုက်​မလဲ…ငတိက​တော့​အေး​ဆေးပဲဟိုကြည့်​ဒီကြည့်​နဲ့သူမဟုတ်​သလို..ဖုန်းကာ​ဗာ​တွေ​တောင်​လိုက်​ကြည့်​​နေလိုက်​​သေး…
“မ​အေး​သောင်းကို Follow လုပ်​​ပေးထား​နော်​ Facebook မှာ..
​နောက်​​နေ့ဖိုင်​​ဘာ တို့ လမ်း တို့ တွမ်​ခုံ တို့လာထည့်​အုန်းမယ်​​နော်​တဲ့…
အပျိုကြီး​တွေ ​ဆေးရုံတက်​​သောအခါ ခွီး​နေရတယ်